Update News | Page5| 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
Sat 09 Jul 2016 - 12:04
မန္တလေးတိုင်း ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်အတွင်းရှိ သိမ်းဆည်းခံမြေဧက တစ်ထောင်ကျော်ကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရက တရားဝင်ပြန်လည်စွန့်လွှတ်ခဲ့သည်။ မတ္တရာမြို့နယ် ရေနံ့သာကျေးရွာရှိ ၁၉၈၇ ခုနှစ်က ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက သိမ်းယူခဲ့သည့် လယ်ယာမြေ ၁,၃၂၉ ဧက အနက် ဧက ၁,၃၀၀ ကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
7July ဦးညွှတ်ဂုဏ်ပြုမှု ကျောင်းသားအင်အားစုများပြုလုပ်.
Thu 07 Jul 2016 - 13:01
၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၇ ရက်နေ့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ၇ ရက် ဇူလိုင်အရေးတော်ပုံကြီးအား ဦးညွှတ်ဂုဏ်ပြုသည့် အခမ်းအနားကို ကျောင်းသားအင်အားစုများမှ ယနေ့ ( ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့)တွင် စုပေါင်းကျင်းပခဲ့ကြသည် ။
ဘူးသီးတောင်၊ကျောက်တော်၊မြောက်ဦးနှင့် မင်းပြားတွင် ရေပြန်ကျ
Thu 07 Jul 2016 - 11:25
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ရေကြီးနစ်မြုပ်မှု ကြုံတွေ့နေရသည့်ဘူးသီးတောင်၊ကျောက်တော်၊ မြောက်ဦးနှင့် မင်းပြားမြို့နယ်များတွင် ဇူလိုင် ၇ ရက်နံနက်ပိုင်းကစ၍ ရေ ပြန်ကျနေပြီဖြစ်ကြောင်းဒေသခံများက ပြောကြားသည်။
၂၁ရာစုပင်လုံညီလာခံ အကြိုပြင်ဆင်ရေးကော်မတီအစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့ ကျင်းပ
Tue 05 Jul 2016 - 11:05
ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ(၂၁)ရာစု ပင်လုံအကြိုပြင်ဆင်ရေးကော်မတီအစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့ကို ယနေ့(ဇူလိုင် ၅ ရက်)တွင် နေပြည်တော်ရှိ Horizon Lake View Hotel တွင်ကျင်းပပြုလုပ်လျှက်ရှိပြီး ဆွေးနွေးပွဲ သို့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ကျေးရွာအချို့တွင် ရေနစ်မြုပ်နေ
Tue 05 Jul 2016 - 11:03
ဇူလိုင်လ ၁ ရက်မှစတင်ကာ မိုးအဆက်မပြတ် ရွာသွန်းနေသည့် အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ကျေးရွာအချို့တွင် ရေလေးပေကျော်ထိ နစ်မြုပ်နေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဟုမ္မလင်းနှင့်ဖောင်းပြင်မြစ်ကမ်းအနီးနှင့်အနိမ့်ပိုင်း ရေဘေးအန္တရာယ် သတိပြုရန်လို
Mon 04 Jul 2016 - 13:32
ချင်းတွင်းမြစ်ရေ ရုတ်တရက် မြင့်တက်လာသောကြောင့် ဟုမ္မလင်းနှင့် ဖောင်းပြင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ မြစ်ကမ်းအနီးနှင့်မြေနိမ့်ပိုင်းနေထိုင်သူများ ရေဘေးအထူးသတိပြုနေထိုင်ကြရန် မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။ယနေ့ (ဇူလိုင်လ ၄ရက်) နံနက် ၈နာရီ ၃၀မိနစ်အခ
မဟာချိုင် နာနာတ်သီးစက်ရုံမှ ဖမ်းဆီးခံမြန်မာလုပ်သား ၁၀၂ဦး ပြန်လွတ်
Mon 04 Jul 2016 - 12:51
မဟာချိုင်မြို့ နာနတ်သီးစက်ရုံတွင် လုပ်ကိုင်နေသော မြန်မာလုပ်သား ၁၂၇ဦး ဖမ်းဆီးခံရမှုအား ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးကလိုက်လံဖြေရှင်းပေးရာ ယနေ့ (ဇူလိုင်၎ရက်)နံနက်ပိုင်းတွင် ၁၀၂ဦး လွတ်မြောက်လာကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးမှသံအမတ်ကြီးဦးဝင်းမောင်က 7Day Daily သို့ ပြောကြားသည်။
အမျိုးသားစာပေဆုရာ စာရေးဆရာ မြတ်ငြိမ်း ကွယ်လွန်
Sun 03 Jul 2016 - 15:32
အမျိုးသားစာပေဆုရ၊ ဘာသာပြန်စာရေးဆရာကြီးမြတ်ငြိမ်းသည် အသက် (၇၇ )နှစ်အရွယ်၌ယနေ့ (ဇူလိုင်လ၃ရက်) နံနက် ၁ နာရီက ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ မြို့နယ်အချို့တွင် လေပြင်းတိုက်ခတ်နေဟုဆို
Sun 03 Jul 2016 - 12:39
ဇူလိုင် ၁ ရက်မှ စတင်၍ မောင်တောမြို့အပါအဝင် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိမြို့နယ်အချို့တွင် မိုးသည်းထန်ခြင်း၊ လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်နေပြီး ပင်လယ်ဒီရေထရက်နှင့် တိုက်ဆိုင်နေသည့်အတွက် မောင်တောမြို့မြေနိမ့်ပိုင်းရပ်ကွက်အချို့သို့ပါ ရေဒီရေတစ်ပေကျော်ထိ တက်နေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ရာဇဂြိုလ်ဆည်အထက်မှ နုန်းတားဆည်တစ်ခု တောင်ကျရေကြောင့် ကျိုးကျ
Sun 03 Jul 2016 - 12:05
ကလေးမြို့၊ ရာဇဂြိုလ်ဆည်အထက်တွင် တည်ဆောက်နေသော နုန်းတားဆည်တစ်ခု တောင်ကျရေ အရှိန်ကြောင့် ကျိုးကျကာ ဆည်တည်ဆောက်ရေးသုံး ယာဉ် ၃ စီး ရေထဲနစ်မြုပ်သွားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
" ဦးဂမ္ဘီရ(ခ)ဦးညီညီလွင်ကို တရားစွဲဆိုထားသည့် အမှုများ ရုပ်သိမ်း "
Fri 01 Jul 2016 - 12:38
ရွှေဝါရောင်သံဃာ့အရေးအခင်းလှုပ်ရှားမှုများတွင် ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သည့် ဦးဂမ္ဘီရ(ခ) ဦးညီညီလွင်ကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း တရားစွဲဆိုထားမှုအားလုံးကို ဇူလိုင်လ ၁ ရက်၊ နံနက်ပိုင်းက ရုပ်သိမ်းလိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မန္တလေး မင်္ဂလာဈေး ဈေးသူ၊ဈေးသားများ ဆန္ဒထုတ်ဖော်
Thu 30 Jun 2016 - 15:05
မန္တလေးမင်္ဂလာဈေး အသစ်တည်ဆောက်မည့်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဈေးသူ၊ဈေးသားများ ယနေ့ (ဇွန်လ ၃၀ ရက်)တွင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသည်။
"၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံကို သြဂုတ်လတွင် ကျင်းပရန် ဆွေးနွေး "
Tue 28 Jun 2016 - 13:58
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် NCAရေးထိုးထားသည့် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံပွဲတွင်၂၁ရာစုပင်လုံညီလာခံကို သြဂုတ်လအတွင်းကျင်းပရန်၊ လက်မှတ်မရေးထိုးရသေးသည့် အဖွဲ့များပါဝင်လာနိုင်ရန် စသည်ကိစ္စများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
"ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုထူထောင်ရန်သာ အစိုးရ ရည်ရွယ်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြား "
Tue 28 Jun 2016 - 11:12
အစိုးရ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ စစ်မှန်သည့် ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ထူထောင်ရန်ဖြစ်ပြီး ယင်းရည်ရွယ်ချက်နောက်ကွယ်တွင် ကွယ်ဝှက်ထားသည့် ကိစ္စရပ်လုံးဝမရှိကြောင်း နိင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသည်။
ဗီယက်နမ်အလှမယ် ရွှေတိဂုံစေတီတော်သို့ သွားရောက်ဖူးမြော်
Tue 28 Jun 2016 - 11:08
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရိုက်ကူးရန်စီစဉ်ထားသည့် ဗီယက်နမ်အလှမယ် ငုရင်ထရန်ဟုရန်မေသည် အဆိုပါဇာတ်ကားအတွက် ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ရန် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလျက်ရှိရာ ယနေ့( ဇွန် ၂၈)နံနက်ပိုင်းက ရွှေတိဂုံစေတီတော်သို့ သွားရောက်ဖူးမြော်ခဲ့သည်။
"ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများတွေ့ဆုံရန်စီစဉ်သည့်တာဝန်ရှိသူများအား ရာထူးမှခေတ္တဖယ်ရှား"
Sat 25 Jun 2016 - 10:09
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာလုပ်သားများ မဟာချိုင်မြို့ ထလေထိုင်းဈေးခန်းမတွင် တွေ့ဆုံရန် စီစဉ်ပေးသော စမွတ်ဆာခွန်(မဟာချိုင်)ခရိုင် မဟာချိုင် ခရိုင်မှုးအပါအဝင် ရဲအရာရှိ ၂၃ ဦးကို ပွဲစီစဉ်ပုံညံ့ဖျင်းမှုကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်က ရာထူးမှ ခေတ္တဖယ်ရှားလိုက်ကြောင်း ဘန်ကောက်မြို့သို့ ရောက်ရှိနေသော 7Day သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။
Fri 24 Jun 2016 - 15:41
ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် (ဇွန်လ ၂၀ ရက်) က သေနတ်ဒဏ်ရာဖြင့် သေဆုံးခဲ့သည့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား မောင်ဂွမ်ဆိုင်းအောင်အမှုအတွက် တရားမျှတမှုရရှိစေရန် စုပေါင်းတောင်းဆိုပွဲကို ယနေ့ (ဇွန်လ ၂၄ ရက်) မွန်းလွဲပိုင်းက ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမရှေ့တွင် ကျောင်းသားလူငယ်များက စုပေါင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထိုင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများနှင့် တွေ့ဆုံ.
Fri 24 Jun 2016 - 11:46
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယနေ့(ဇွန်၂၄ရက်)နံနက် ၁၀နာရီခွဲတွင် ထိုင်းနိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ ထိုင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအား မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာလုပ်သားများ ပတ်စပို့ရရှိရန်နှင့် လုပ်အားခတန်းတူရရှိရန် ညှိနှိုင်းမည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆို
Thu 23 Jun 2016 - 16:34
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော မြန်မာလုပ်သားများကို ပတ်စပို့များရရှိရေး နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံသားများနည်းတူ လုပ်အားခတန်းတူရရှိရေးနှင့် အကာအကွယ်ရရှိရေးအတွက် ယခုခရီးစဉ်တွင် ညှိနှိုင်းပြောဆိုသွားမည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားလိုက်သည်။
ဝင်ရောက်ခွင့်မရသော မြန်မာလုပ်သာများ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွား
Thu 23 Jun 2016 - 13:34
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တွေ့ဆုံရန် ထိုင်းအစိုးရက သီးသန့်ခေါ်ယူ ထားသော မြန်မာလုပ်သားများကို အခြားမြန်မာလုပ်သားများက ဝင်ရောက်ခွင့်မပေးဘဲ မောင်းထုတ်သဖြင့် မွန်းလွဲ၁နာရီခွဲအချိန်တွင် ကားများဖြင့် ပြန်သွားကြကြောင်း ယင